के रूस बेलारस हराउन सक्छ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
के रूस बेलारस हराउन सक्छ?
फेब्रुअरी 17, 2021 फेब्रुअरी 17, 2021 क्रिस्टिना किटोवा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, बेलारुस, युरोप, विशेष समाचार, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, रूस, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रूस थोक र B2B
लुकाशेन्कोले पुतिनलाई आर्थिक सहयोगको लागि सोधेको छ।
बेलारूस र रसियाले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सक्थे।
बेलारुस रूसमा सम्मिलित हुने र संघ राज्यको हिस्सा बन्ने सम्भावना छ।
बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिनको आगामी साताको सोचीमा बैठक हुनेछ। यो वार्ता मा वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रहरु को बारे मा छलफल समावेश छ कि आशा गरिन्छ। रूस र बेलारुस बीचको क्रेडिट आपरेशनहरू एकीकृत गर्न पनि सम्भावना छ।
राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा बेलारुसका लागि रसिया सबैभन्दा ठूलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण साझेदार हो। बेलारुस र रसिया बीचको नागरिकको समान अधिकार सम्बन्धी सन्धि सन् १ 1998 XNUMX XNUMX, डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो, रोजगार र चिकित्सा सेवा र शिक्षाको पहुँचलाई कवर गर्ने। दुई देशहरु लाई सुपराननल युनियन राज्यको गठन गर्दछ।
थप रूपमा, यो स्पष्ट छ कि राष्ट्रपति लुकाशेन्कोले राष्ट्रपति पुतिनलाई आर्थिक सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने छन्।
यसबाहेक, राष्ट्रपति लुकाशेन्कोले बेलारूसी एनपीपी निर्माणका लागि छुट्याइएको billion अर्ब डलरबाट बाँकी रकममा पहुँच पाउने अपेक्षा राखेका छन्।
राष्ट्रपति लुकाशेन्को पनि विश्वास छ कि यदि रूसले बेलारुसलाई हरायो भने त्यसले रूसको लागि ठूलो खतराको संकेत दिन्छ।
यद्यपि राष्ट्रपति लुकाशेन्कोले रूसबाट थप सुविधाहरू लिन खोजिरहेका छन्। उनले भने कि मिन्स्कमा रहेको सैन्य शिक्षा केवल प्रकृतिमा प्रतिरक्षामूलक छ, र बेलारस ती क्षेत्रहरूको रक्षा गर्न सक्षम छ।
"मलाई विश्वास छ कि बेलारुस रूसको लागि निरपेक्ष प्राथमिकता रहनेछ," राष्ट्रपति लुकाशेन्कोले भने सबै बेलारूसी जनताको असेंब्ली। "मलाई पक्का विश्वास छ कि रूसले अन्य देशहरूसँगको सहयोगको लागि हाम्रो आकांक्षाको इमान्दार समझ छ।"
उनले थपे, "हाम्रो मुख्य आर्थिक साझेदार र रणनीतिक सहयोगी हाम्रो रूस रहेको छ र रहनेछ। रुसी-बेलारसियन एकता यस क्षेत्रको शान्तिमय र स्थिर भविष्यको चाबी हो। ”
यो याद गर्नुपर्दछ कि फेब्रुअरी on मा रूसी उपप्रधानमन्त्री युरी बोरिसोभले मिन्स्कमा बेलारसियाका प्रधानमन्त्री रोमन गोलोभेन्कोसँग भेट गरे। मस्कोमा रूसी दूतावासका अनुसार दुई पक्षले दुई देशबीचको व्यापारको मात्रा बढाउने योजनाहरूको बारेमा छलफल गरे।
राष्ट्रपति लुकाशेन्कोले धेरै बयान दिए जसलाई पागल प्रवृत्ति अन्तर्गत वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। एक कथन एप्पल आईफोन प्रयोगको सम्बन्धमा थियो। राष्ट्रपति लुकाशेन्कोका अनुसार एप्पलले पश्चिमी गुप्तचरलाई बेलारसियाली नागरिकहरूको जासूसी गर्न अनुमति दिन्छ। उसले बेलारुसियालाई केवल रोटरी फोन प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छ।
थप रूपमा, राष्ट्रपति लुकाशेन्को विश्वास छ कि उहाँ एक लोकप्रिय बेलारूसी नेता हुनुहुन्छ, जब वास्तविकतामा, उहाँ हुनुहुन्न। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि स्वेतलाना टिकानोव्स्कायाले चुनावमा जित्नुभयो।
युनियन स्टेट, जसलाई संघ र रसिया र बेलारसको संघ पनि भनिन्छ, एक सुपरवाइनेसनल संघ हो जुन रूसी संघ र गणराज्य बेलारुसको मिलेर बनेको छ। युनियनमा रुचि, दुबै रसिया र बेलारुसबाट, बारम्बार झर्दै गएको छ।
बेलारूसी नेताले सोच्छन् कि बेलारूससँग आकर्षक उद्योगहरू छन् जसमा लगानी गर्न सकिन्छ। यद्यपि, प्रतिबन्धहरू र पश्चिमसँगको नराम्रो सम्बन्धका कारण बेलारुसमा रुस र चीनसँगको संयुक्त लगानीको एकमात्र मौका छ।
यसबाहेक, अपेक्षानुसार, पश्चिमले गत हप्तामा आयोजित जनसभाको वैधानिकतालाई मान्यता दिएन।
युरोपियन युनियनको स्थिति बेलारुसका जनतालाई दमन वा अभियोगबिना आफ्नो देशको भविष्य छनौट गर्न सक्षम गर्दछ।
अचम्म मान्नुपर्दैन, ईयु प्रतिनिधिमण्डलले उक्त कार्यक्रमको बहिष्कार गर्‍यो, जसमा यसलाई आमन्त्रित गरिएको थिएन। उही समयमा, सम्मेलनको दौरानमा दिइएका वक्तव्यहरू पश्चिमले नियालेका थिए।
समग्रमा, यो स्पष्ट छ कि राष्ट्रपति लुकाशेन्कोसँग क्रेमलिनको समर्थनमा सत्तामा रहने अवसर मात्र छ। अर्को हप्ताको बैठकले यस बर्षको बाँकी भागको लागि टोन सेट गर्नेछ।
बेलारुस रूसमा सम्मिलित हुने र संघ राज्यको हिस्सा बन्ने सम्भावना छ। राष्ट्रपति लुकाशेन्को कान्छो छोरा पहिले नै मस्कोमा बसोबास गर्दै छन्। अन्ततः, उनको बुबा पनि रूसमा बसाईनेछ।
अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को बेलारुस सांप्रदायिक समाचार EU रूस व्लादिमीर पुतिन
के इन-हाउस वकिलले कम्पनीको विकासलाई मद्दत गर्दछ वा बाधा दिन्छ?
समीक्षा - अधिक जस्तै "बेकार छ पाँचौं अवसर"
२०२१ मा १० सर्वश्रेष्ठ सफ्टवेयर समीक्षा ब्लग